यदि तपाईंसँग भिडियो गेम कन्सोल छ भने, यो $ 50 उपकरणले तपाईंलाई धेरै छिटो महसुस गराउन सक्छ
गत वर्ष ढिलो मान्छेहरू कोरोनाभाइरस लकडाउनमा घरमै अडिरहेका थिए भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर आश्चर्यचकित हुनु पर्दैन कि सोनी र माइक्रोसफ्टका नेक्स्ट-जेन भिडियो गेम कन्सोलहरूले आफ्नो पहिलो विमोचन पछि उच्च उडानमा छन्। । अचम्मको कुरा, निन्टेन्डो स्विचले आफ्नो उमेरको बावजुद प्लेस्टेशन and र Xbox श्रृंखला X लाई मात दिन सक्दछ। अघिल्लो जेनरेशन गेमिंग कन्सोलहरू जस्तै PS5 र Xbox One पनि अझै छिटो बिक्रीमा छन्। संक्षिप्तमा, सबैले महामारीबाट उम्कने उपायहरू खोजिरहेका देखिन्छन्, यदि एक पटकमा केहि घण्टाको लागि मात्र।
चाहे तपाईले भर्खर ब्रान्ड नयाँ भिडियो गेम कन्सोल किन्नु भएको छ वा वर्षौंको लागि उहि हार्डवेयर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ एक विशेष उपकरण छ जुन तपाईले चेक आउट गर्न सोच्नु पर्छ। होइन, हामी आधारभूत कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं जस्तै नियन्त्रणकहरू वा बाह्य हार्ड ड्राइभहरू। हामीaको कुरा गर्दैछौं Amazon on० अमेजनमा साधारण सानो ग्याजेट जसले कुनै पनि भिडियो गेम कन्सोल धेरै छिटो बनाउन सक्छ।
यदि तपाईं हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने, अनलाइन मल्टिप्लेयर गेमिंग र खेल स्ट्रिमिंग आधुनिक कन्सोलहरूको सबैभन्दा उत्तम सम्पत्ति हो। यो विशेष गरी आजका दिनहरूमा साँचो हो, किनकि साथीहरूसँग खेलहरू खेल्न सधैं घर भित्र भेला हुन उचित हुँदैन। होईन, खराब वाइफाइ जडानको कारण चीजहरू धीमा हुँदा कुनै पनि द्रुत गतिले गेमि session सत्रलाई बिगार्न सक्दैन। कसैले पनि तपाइँको जडान ड्रप भएको खण्डमा पुन: जडान हुनको लागि तपाइँलाई पर्खिन पर्दैन, र यदि तपाइँको संकल्प जारी रहन्छ भने कसैले पनि तपाइँको स्ट्रिम अवलोकन गर्न चाहँदैन। गडबडी गर्न।
तपाईं नयाँ वायरलेस राउटर वा जस्तो परिष्कृत जाल प्रणालीको रूपमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ Eero6जाल वाई-फाई प्रणाली नि: शुल्क 4K फायर टिभी स्टिकको साथ आउँदछ यदि तपाईं यो हप्ता एक अर्डर गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाई वास्तवमा समस्या समाधान गर्न चाहानुहुन्छ भने कुञ्जी वाइफाइ पूर्ण रूपमा हटाउनु हो।
TP-Link AV1000 Powerline स्टार्टर किट (TL-PA7017 KIT) - Gigabit Port, Plug & Play, P मा इथरनेट ...	मूल्य:49,99 $
कुनै ताररहित जडान कहिल्यै तार सहितको इन्टरनेट जडानको रूपमा स्थिर हुँदैन। वास्तवमा समस्या भनेको केट-6 केबल चलाउनु र तपाईंको घरमा ईथरनेट पोर्ट स्थापना गर्नु जटिल र महँगो व्यापार हो। के तपाइँ सायद महसुस गर्नुहुन्न कि वायरिंग पहिले नै त्यहाँ छ, तपाईं भर्खर यसलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। जस्तै समाधानको साथ TP-Link AV1000 Powerline स्टार्टर किट, तपाईं तत्काल आफ्नो सामान्य पुरानो पावर आउटलेटहरू सुपर-फास्ट गिगाबिट ईथरनेट पोर्टमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको एउटा बाकस तपाईंको राउटर नजिकको आउटलेटमा प्लग गर्नु छ र अर्को तपाईंको भिडियो गेम कन्सोलको नजिकको आउटलेटमा। प्रत्येक बक्समा एकल बटन थिच्नुहोस् तिनीहरूलाई जडान गर्न, त्यसपछि तिनीहरूलाई नियमित ईथरनेट केबलहरू प्रयोग गरेर प्लग गर्नुहोस्।
Presto! अब तपाईं संग एक सुपर-द्रुत तार ईन्टरनेट जडान तपाईंको घर मा कहीं पनि छ। यो सेट अप गर्न को लागी धेरै सरल छ र परिणामहरु तत्काल छन्। कम्तिमा यसलाई जान नदिन बौलाहा हुनुपर्दछ यदि तपाइँ गेमि aboutमा गम्भीर हुनुहुन्छ भने र एक जोडिएको बोनसको रूपमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि सबै चलचित्रहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, र भिडियोहरू तपाईले कन्सोलको अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरी स्ट्रिम पनि गर्नुहुनेछ। फाइदा यो वास्तवमै एक जीत / जीत हो।
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) https://bgr.com/deals/best-playstation-5-accessories-on-amazon-speed-up-gaming-5923170/ मा प्रकाशित भयो